မာယာ Legends |
ဒီရှေးဟောင်းမာယာကြိမ်ပို့ဆောင်ခံရဖို့အဆင်သင့် Get အခမဲ့လှည့်ဖျား slot သငျသညျအဘယျသို့အနိုင်ရမည်ဟု Keep, Mayan Legend. ဤသည်အံ့သြဖွယ်ဂရပ်ဖစ်နှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများရှိပြီး3အနိုင်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေ. အဆိုပါ အခမဲ့လှည့်ဖျား slot ဝင်းကဘာလဲသင်က Keep အားလုံးမျက်နှာဖုံးများစုဆောင်းနှင့်ကြီးမားသောငွေသားအနိုင်ရတဲ့အကြောင်း. ဤသည်၌, သင်အန်စာတုံးနှင့်ဘာမျှမပေမယ့်စင်ကြယ်သောကံကိုလှိမ့်ရန်ရှိသည်. အဆိုပါ IWG ဂိမ်း developer များကဤအံ့သြဖွယ်ဂိမ်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်အဆောက်အဦရဲ့နောက်ကွယ်ကသူများဖြစ်ကြ၏. သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းနှုန်းအဖြစ်, သူတို့ကဒီဖန်တီးခြင်းအတွက်အံ့သြဖွယ်အလုပ်တစ်ခုပြုကြပြီ အခမဲ့လှည့်ဖျား slot ဝင်းကဘာလဲသင်က Keep.
လာမယ့်ကမ္ဘာကြီးရန်သင့်အားသယ်ယူပို့ဆောင်မယ့်အကောင်းဂိမ်းနဲ့တူဘာမှမရှိဘူး. ဒါကြောင့်, အဆင်သင့်ရကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချို့သောကြီးမားသောဆုဒီလက်ငင်းအနိုင်ရရှိဂိမ်းနှင့်အိတ်ကစားစတင်ရန်.
အဆိုပါမာယာ Legends နှင့်အတူတစ်ဦးကကမ္ဘာသစ် Explore
လှပသောအဆင်းအရောင်တစ်ဦးကရွေးချယ်ရေးကဒီမှာအပေါငျးတို့သမျက်နှာဖုံးများဖန်တီးခြင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်. အဆိုပါမျက်နှာဖုံးများဿုံကဒ်အထိုင်၏ဆောင်ပုဒ်နှင့်ကိုက်ညီရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြ. အဆိုပါမျက်နှာဖုံးများ၎င်းတို့၏အရောင်များအားဖြင့်မတူညီနိုင်ပါ: ပြာသော, green, ခရမ်းရောင်နှင့်အဝါရောင်. ဒါဟာ pinkish မက်မွန်ကောင်းကင်ပြာနဲ့သစ်တောနောက်ခံနဲ့ background မှာသစ်ပင်များကိုဆန့်ကျင်သတ်မှတ်. သူ့ဟာသူအတွက် slot ကနံရံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. မျက်နှာပြင်တစ်ဖက်တွင်သင်သည်နှစ်ခုအန်စာတုံးကိုကြည့်ရှုနိုင်, တဦးတည်းအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်တဦးတည်းနှင့်မျက်နှာပြင်၏အခြားဘက်မှာသူတို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့စောင့်ရှောက်အဖြစ်မျက်နှာဖုံးများ၏အရောင်နှင့်အတူဖြည့်ဆည်းပေးသည်သောစားပွဲပေါ်မှာဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ RTP လည်းအလွန်မြင့်မားသည်, တစ်ဦးအဆင့်အထိရောက်ရှိ 85.16%.
ဤ အခမဲ့လှည့်ဖျား slot ဝင်းကဘာလဲသင်က Keep အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဂိမ်းရှိပါတယ်. All you need to do is roll the dice and the masks on the table will keep getting destroyed. စတင်မှာ, သင်ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်သင့်ကစားပွဲ၏အစုရှယ်ယာများကိုသတ်မှတ်ပေးရန်တောင်းပါလိမ့်မယ် + နှင့် – options. ထိုအခါသင် Play စ option ကို click လုပ်ပါလိမ့်မယ်နဲ့ဂိမ်းစတင်မည်. အဆိုပါနှစ်ဦးကိုအန်စာတုံးထံမှသြဒီနိတ်ကိုပြသပါလိမ့်မယ် 1-6 တစ်ခုချင်းစီကိုအဆုံးအဘို့. သူတို့အားကိုသြဒီနိတ်၌နေသောမျက်နှာဖုံးဖျက်ဆီးခံရရနှင့်ဖျက်ဆီးခံရတဦးတည်းဆင်တူသည်အခြားကပ်လျက်မျက်နှာဖုံးလည်းပျက်စီး. အရောင်များ၏အတန်းမျက်နှာဖုံးများ၏တိုးပွားလာနှင့်အတူဖြည့်ဆည်းစောင့်ရှောက်မည်. သငျသညျလုံးဝတဦးတည်းအတန်းဖြည့်လိုက်တဲ့အခါ, သင်သည်သင်၏အနိုင်ရဘို့အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်.
ဤ အခမဲ့လှည့်ဖျား slot ဝင်းကဘာလဲသင်က Keep ဤကဲ့သို့သောဂိမ်းကိုကြိုက်မှလူများအတွက်လိုအပ်ကြောင်းအရာအားလုံးကိုရှိ. ကြီးမားအနိုင်ရအလားအလာ, ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ဂရပ်ဖစ်, အံ့သြဖွယ်အသံကဆိုးကျိုးများနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဂိမ်းမာယာဒဏ္ဍာရီစေသည်ဘာလောင်းကစားသမားတွေအကြားအများဆုံးဖွင့ ်. တစျဦးဖွစျသညျ.